Nin shaley qarax ka geystay Baydhabo oo la qabtey – idalenews.com
Wararka ka imaanaya Magaalada baydhabo ee Goblka Bay ayaa waxaa ay sheegayaan in ciidamada Dowlada Soomaalkiya howlgalo balaaran ay ka sameeyeen Gudaha Magaalada Baydhabo gaar ahaana qaar ka mid ah Xaafadaha Magaalada Baydhabo.
Howlgalka oo si wadajir ah ay u sameynayeen ciidamada Booliiska iyo kuwa nabad sugida ee Magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu soo qabtey dad badan oo lala xariirinayo iney ka tirsan yihiin kooxda Shabaab ee Soomaaliya,waxaana howlgalkan uu ka danbeeyay kadib markii shaley qarax uu ka dhacay Baydhabo.
Taliyaha qeybta Booliiska Gobalka Bay Mahad C/raxmaan oo warbaahinta Muqdisho la hadley ayaa waxaa uu sheegay iney gacanta kusoo dhigeen rag badan oo amaan xumo ka wadey Magaalada Baydhabo islamarkaana xariir la leh sida uu warka u dhigey Kooxda Shabaab ee Soomaaliya.
Isagoo hadalkiisa wata ayaa waxaa uu tilmaamay iney sidii kale ciidamada Dowlada Soomaaliya ay gacanta kusoo dhigeen Nin shaley Qarax Bam ah ku weeraray ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugnaa qeybo ka mid ah Magaalada Baydhabo,kaasi oo uu tilmaamay iney ku hayaan Xabsiga Baydhabo.
Mucaaradka Syria oo gacanta ku dhigay Airpor ay la haayen Ciidamada Militari-ga